WPML: Tugharia WordPress gi na ebe a na otutu ngwangwa na oru ntughari oru | Martech Zone
WPML bụ ọkọlọtọ na ụlọ ọrụ maka imepụta na ịtụgharị ọdịnaya gị na saịtị WordPress dị ọtụtụ. Ana m agbazi ugbu a GTranslate ngwa mgbakwunye na Martech Zone iji mee ntụgharị asụsụ ntụgharị asụsụ dị mfe, asụsụ dị iche iche. Nke a agbasawanye iru anyị na ụwa yana okporo ụzọ ọchụchọ engine na saịtị m.
Anyị na-arụ ọrụ na itinye saịtị maka onye ahịa ugbu a nke nwere ọnụ ọgụgụ ndị Hispanic dị mkpa. Ọ bụ ezie na ngwa mgbakwunye dị ka GTranslate nwere ike ịme ntụgharị asụsụ nke ọma, ọ gaghị eweghara nuances nke olumba maka nnukwu ndị na-ege anyị ntị na Mexico na America nke anyị nwere olile anya iru. Maka nke ahụ, anyị ga-eji ntụgharị asụsụ sụgharịrị ọdịnaya maka mmetụta kachasị.
Omenala nsụgharị chọrọ azịza dị iche, na onye ndu na plugins ntụgharị WordPress bụ WPML.
Etu esi asụgharị WordPress saịtị gị na WPML
Atụmatụ WPML gụnyere
WordPress - latesụgharị ọ bụla mmewere gị WordPress saịtị, gụnyere igodo, wijetị, peeji nke, isiokwu, omenala post iche, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. WPML na-akwado onye nchịkọta akụkọ Gutenberg.
Asụsụ - WPML nwere ihe karịrị asụsụ iri anọ. I nwekwara ike ịgbakwunye asụsụ nke gị (dị ka Canadian French ma ọ bụ Spanish Spanish) site na iji nchịkọta asụsụ WPML.
Nhazi URL - nwere ike ịhazi ọdịnaya asụsụ dị iche iche n'otu ngalaba (na akwụkwọ ndekọ asụsụ), na ngalaba mpaghara, ma ọ bụ na ngalaba dị iche iche.
Nsụgharị igwe - Nweta isi okwu na ntụgharị asụsụ gị site na iji ntụgharị asụsụ nke igwe ka ị nwee ike chekwaa oge na ọrụ ọrụ ntụgharị na mgbada.
Ntuziaka Onye Ọrụ - Gbanwee ndị ọrụ WordPress nkịtị ka ha bụrụ ndị ntụgharị. Ndị ntụgharị ntụgharị nwere ike ịnweta naanị ọrụ akọwapụtara nke ndị njikwa na-enyefe ha.
Ọrụ Ntugharị - Jikọọ WPML njikwa ntụgharị asụsụ dị ike yana ọrụ ntụgharị ntụgharị ị họọrọ. Denye ọdịnaya dị mfe maka ntụgharị asụsụ ozugbo site na WPML's Dashboard Ntụgharị asụsụ. Mgbe ntụgharị asụsụ zuru ezu, ha na-egosi na saịtị gị, dị njikere maka mbipụta ya.
Isiokwu na Ntughari Eriri Nsụgharị - WPML tọhapụrụ gị na nsogbu nke ịdezi faịlụ PO na ibudata faịlụ MO. Nwere ike ịtụgharị asụsụ ederede na plugins ndị ọzọ yana na nchịkwa Admin ozugbo site na Nsụgharị Nsụgharị interface.
Nkwado Asụsụ WooCommerce Na-akwado
Jiri WooCommerce na-agba ọsọ na saịtị e-commerce ọtụtụ asụsụ. Nwee nkwado zuru oke maka ngwaahịa dị mfe ma na-agbanwe agbanwe, ngwaahịa metụtara ya, ahịa na nkwalite, yana ihe ọ bụla WooCommerce na-enye.
WPML na-egosi gị ederede nke chọrọ ntụgharị asụsụ ma na-ewuru gị ụlọ ahịa atụgharịrị zuru ezu. Ndị ọbịa ga-enweta usoro ịzụrụ azụ zuru oke, bido na ndepụta ngwaahịa, site na ụgbọ ibu na ndenye ọpụpụ, yana ozi ịntanetị nkwenye mpaghara.
Kwesighi ịme ihe ọ bụla pụrụ iche iji mepụta isiokwu dị iche iche dị iche iche. Naanị jiri WordPress API ọrụ na WPML na-elekọta ndị ọzọ.
Ngosi: Abụ m mmekọ maka WPML.
Tags: otutu asụsụọtụtụ asụsụ wordpressmultilingual permalink Ọdịdịntụgharị asụsụ mgbakwunyeọrụ ntụgharị asụsụNtughari WooCommerceWordPressntụgharị wordpresswordpress ntụgharị ngwa mgbakwunyewpml